Fikoloana ny harem-pirenena :: Hanampy amin’ny fiarovana ny vakoka ny Foloalindahy • AoRaha
Fikoloana ny harem-pirenena Hanampy amin’ny fiarovana ny vakoka ny Foloalindahy
Fifanomezan-tanana. Voasonia tamin’ny 3 jolay lasa teo ny fifanaraham-piarahamiasa teo amin’ny minisitry ny fiarovam-pirenena, ny lehiben’ny etamazoro jeneralin’ ny tafika malagasy ary ny ministeran’ny kolontsaina sy ny serasera izay miompama amin’ny fiarovana an’ireo vakoka sy ny harem-pirenena mirakitra tantara rehetra manerana ny Nosy. Nifanojo tamin’ny fanokafana ho an’ny
daholobe ny mozean’ Andafiavaratra omaly ny fampahafantarana an’izao fiaraha-miasa izao.
« Mba hialana amin’ny hoe vaky ny mozea, manjavona ny harem-bakoka, nisy nanimba na nandoro ny toerana manan-tantara no tena nanaovana an’ity fifanaraham- piarahamiasa ity. Manomboka izao dia hifanolo-tanana ny foloalindahy sy ny tafika amin’ny hiarovana ireo vakoka sy ny tantara raiketiny», hoy ny minsitry ny Kolontsaina sy ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo.
Nanentana ihany koa ny minisitra ny amin’ny hahasarotiny ny tsirairay amin’ny fiarovana ny vakoka sy ny tantara raiketiny satria io no fototry ny maha Malagasy. Nisantarana ny fanentanana ireo ankizy mpianatra nitsidika ny mozean’Andafiavaratra omaly. Efa voasonia ihany koa ireo antotan-taratasy amin’ny hanavaozana ny lapan’i Manjakamiadana ary hanomboka tsy ho ela ny asa araka ny fanampim-baovao.
Tantara sy lovan-tsofina Tanàna niandohan’ny ody varatra sy havandra Anosivato
Fanesorana mpivarotra amoron-dalana Miha be mpankasitraka ny fandaminana ny arabe
Fampiaraham-peo :: Nivoaka ilay hira iarahan’i Wawa sy Diamond Platnumz
Fibeazana amin’ny asa soratra :: Mitohy ny fanentanana amin’ny vaky boky